Ogaden News Agency (ONA) – Casho Sharaf loo sameeyay Jilayaashi Ruwaayada Ogadeniya ee London Ka dhacday & Martisharafti Ruwaayada
Casho Sharaf loo sameeyay Jilayaashi Ruwaayada Ogadeniya ee London Ka dhacday & Martisharafti Ruwaayada
Caawa waxaa magaalada London looguqabtay xaflad casho sharaf ah, Jilayaashi Ruwaayada “Aan Habee Ilmahayga Hooyo Ma odhan Karaa” munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa loogu talogalay in lagu sagootiyo marti sharaf ururka dhalinyarada OYSU UK uga yimid Wadamada Scandenevianka xubnahaas oo ruwaayadan ka qeybgalay.
Gudoomiyihii Hore ee Jaaliyada London Mudane Xuseen Geele oo Barnaamijkan sagoontinta iyo mahadnaqa isugujira kaqeybgalay ayaa Dhalinyarada uga mahad celiyay shaqadii wanaagsaneyd ee ay u qabteen halgankooda. Gudoomiye Xuseen ayaa fariin kooban gaadhsiiyay xubnaha dhalinyarta Ogadeniya midaas oo uu ugutalo galay inuu ku guubaabiyo islamarkaasna ku xasuusiyo shaqadan iskaa wax u qabso ah ee qof kastaaba waqtigiisa, codkiisa iyo maalkiisaba uGu hurayo sidii loo garab istaagi lahaa ummada dulmiga gumeysiga abbysinia ku hoos jirta islamarkaasna heeryadaas guumeysiga la isaga qaadi lahaa.
Munaasabadan Waxaa ka hadlay Mudane Cabdirisaaq (Gufeys) oo isna dhinaciisa kawaramay khibradii iyo guulihii laga dhaxlay Ruwaayadi weyneed ee Dhalinyaradu ku qabatay London. Waxa uuna mudane Cabdirisaaq soo jeediyay in Ruwaayada loo gudbiyo wadamada kale ee ee Europe waqtiga ugu habboon midaas oo la isla qaatay.
Xoghayaha Ururka OYSU Denmark Mudane Cabdinaasir oo isagu kamid ahaa xubniha sharafta badan ee Ruwaayadan kasooqeybgalay ayaa isna kawaramay sida wanaagsan ee loogusoo dhaweeyay London isaga iyo saxiibadi kale ee halganka ee wadamada Scandenevia ka yimid. Aad baan ugu faraxsanahay shaqadii ururkeenu qabtay habeen hore, aad baana loogu diirsaday, cadow badana waa ka naxay.
Maxamed Olle, xubnaha ugu firfircoon jaaliyada Ogadeniya ee Sweden kamid ah ayaa isaguna ka hadlay nuxurkii Ruwaayada isaga oo sheegay inay taabatay mawduuc aad u mugweyn bulshada Ogadeniya iyo ummada Islaamkuba u baahantahay inay oggadaan. Midaas oo abaabul iyo wacyi galin xoogan abuuri karta dhinackastaba.
Mustafe Diirane, Xoghayaha OYSU UK ayaa dhinaciisa taabtay Qorsheyaal ururka Dhalinyarada OYSU UK horyaala sidii loo fulin lahaa. Barnaamijka Ruwayadu waxuu kamid ahaa qorshayaashi ururka u yiilay, ayuu yiri Xoghayahaya OYSU UK- waana Alxamdulilaahi maanta hadii howshaas aan ku guuleysanay Bandhiggaas. Waxaa durbaba jira Jaaliyado Badan oo UK dheexdeeda ama Europe iyo caalamka kaleba leh oo soo codsaday in ruwaayada lasoo gaadhsiiyo waana ka howlgali doona.
Munaasabadan Casho sharafta ayaa guul kusoo dhamaatay, Waxaana halkaas loogu duceeyay dhamaan xubnihii kaqeybqaatay ruwayadan, shacabka Ogadeniya, in allaah guusha soo dadajiyo. In allaah Safar nabad qab caafimaad leh ku geeyo xubnaha safraya qofkastana Allaah u dhibyareeyo duruufihiisa gaarka ah.